पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वारा नै कार्यविधि मिचेर ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी | Kendrabindu Nepal Online News
२९ पुष २०७६, मंगलवार १०:०५
गृह मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई नौ जनासम्म सुरक्षाकर्मी दिइने व्यवस्था छ । तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि कार्यविधि नाघेर सुरक्षाकर्मी राख्दै आए पनि गृह मन्त्रालयले ती सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न सकेको छैन । प्रहरीका निकाय पनि ती सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउन असफल हुँदै आएका छन् ।
प्राप्त तथ्यांक अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाललाई कार्यविधि अनुसार सुरक्षा प्रयोजनका लागि नौ जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइनुपर्नेमा ७७ जना दिइएको छ । विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन समितिको २५ जेठ २०६८ को बैठकले भने पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाललाई २६ जना सुरक्षाकर्मी दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २२ माघ २०७४ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले खटाउँदै आएको सुरक्षाकर्मी यथावत् राख्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले समेत कार्यविधि मिचेर सुरक्षाकर्मी राख्दै आएका छन् । उनलाई १९ जना सुरक्षाकर्मी दिइएको छ । सो संख्या कार्यविधि अनुसार पाउनुपर्ने भन्दा १० जना बढी हो । यसैगरी, पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले ३८ जना सुरक्षाकर्मी राख्दै आएका छन् । उनलाई समेत कार्यविधि मिचेर २९ जना बढी सुरक्षाकर्मी दिइएको हो ।
यसैगरी, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई निवासमा ११ जना सुरक्षाकर्मी खटिएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ । यस्तै मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीको सुरक्षाका लागि १० जना सुरक्षाकर्मी खटिँदै आएका छन् । यो पनि कार्यविधिभन्दा बढी हो । यसैगरी, पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दको व्यक्तिगत सुरक्षामा १२ जना खटिँदै आएका छन् । सो संख्या कार्यविधि अनुसार तीन जना बढी हो । यस्तै अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दका लागि १२ जना सूरक्षाकर्मी खटिंदै आएका छन् ।
कार्यविधि मिचेर, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वारा, सुरक्षाकर्मी
Prevगभर्नरका लागि दौडधुप सुरु, नेपालको पदावधि सकिँदै
बैंकमा सर्वसाधारणका पौने चार लाख खाता निष्क्रियNext
प्रदेश नं ५ समाचार : सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र सञ्चारकर्मीले जिते कोरोना
थप ५० जना सुरक्षाकर्मी हेलिकोप्टरमार्फत संखुवासभा पठाईयो
५ तहको सुरक्षा घेरा तोड्दै कसले देखायो प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा ?
सम्झनामा त्यो ‘टीकापुर’ नरसंहार, साढे ३ वर्षपछि न्याय
सरकारले गर्‍यो २ हजार ८ सय ७ सुरक्षाकर्मीलाई शहीद घोषणा